Campaign | SOCIAL ACTION FOR WOMEN
Education For All Campaign အတွက် အလှူရှင်များစာရင်း
ပထမစာသင်နှစ်အတွက် ဧပြီလနဲ့ မေလ ၂ လကို ကမ်းပိန်းလုပ်ဆောင်သွားပါမည်။
၁။ ကိုစံမို မသိင်္ဂီထိုက် မိသားစု (အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှ ကျောင်းသားတဦးအတွက် တနှစ်စာအလှူငွေ ဒေါ်လာ၂၀၀။
၂။ ဦးတင်အောင်ခိုင် ဒေါ်ခင်မျိုးသက် သမီးငယ် မသက်စုတင် မိသားစု (အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှ ကျောင်းသားတဦးအတွက် တနှစ်စာ အလှူငွေ ဒေါ်လာ ၂၀၀။
၃။ မခင်မေဇော်မိသားစု (အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှ ကျောင်းသားတဦး တနှစ်စာ အလှူငွေဒေါ်လာ၂၀၀။
၄။ ကိုဝင်းနိုင်ဦး မအေးအေးမော် (အင်္ဂလန်နိုင်ငံ) မှ ကျောင်းသား ၂ ဦး အတွက်
တနှစ်စာ ဒေါ်လာ ၄၀၀။
၅။ ကိုအောင်ဇာနီ မနန်းအေးမာ သားငယ်ရှိုင်းရှိုင်း (အမေရိကန်နိုင်ငံမှ) ကျောင်းသားတဦးအတွက် ၆ လစာ ဒေါ်လာ ၁၀၀။
၆။မနန်းသူဇာ (ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွေပြောင်းအလုပ်သမားတဦး )မှ ကျောင်းသားတဦးအတွက် တလစာ
ရ။ ကိုလှစိုးနိုင် (ထိုင်းနိုင်ငံ) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတဦးမှ ကျောင်းသားတဦးအတွက် ၂ လစာ
၈။ ကိုစိန်ဝင်း မအေးအေးခိုင် သမီး ဒီဇင်ဘာနှင့်သားငယ်မောင်မင်းခန့် (နော်ဝေနိုင်ငံ) မှ
ကျောင်းသားတဦးအတွက် တနှစ်စာ ဒေါ်လာ ၂၀၀။
၉။ ငြိမ်းချမ်းခေတ်မောင်နှမများ (ဖင်လန်နိုင်ငံ) မှ ကျောင်းသားတဦးအတွက် တနှစ်စာ ဒေါ်လာ ၂၀၀။
၁၀။ ဦးဌေးဝင်း ဒေါ်ခင်မြတ်မော် (အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှ ကျောင်းသားတဦးအတွက် ၆ လစာ
၁၁။ ကိုထွန်းထွန်း (ကိုဂင်ကြီး) မချိုချိုအောင် သမီးကြီးပေါ့အိုင်း သမီးငယ်ပီအိုင်းမိသားစု (အမေရိကန်နိုင်ငံ) မှ
ကျောင်းသားတွေအတွက် လစဉ်ပုံမှန် အမေရိကန်ုဒေါ်လာ ၅၀ ဆီလှူဒါန်းပါမယ်။
၁၁။ အန်တီဒေါ်ခင်စိုးဝင်း (အန်တီလုံး) မိသားစု မှ ကျောင်းသားများအတွက် ဒေါ်လာ ၃၀၀။
၁၂။ အန်တီဒေါ်လှလှသန်း (အန်တီ DORIS) မိသားစုမှ ကျောင်းသားများအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀။
၁၃။ ကိုသူရိန် နော်ဆဲဂေအားရွန်နဲ့ သမီးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားမိသားစု (နော်ဝေနိုင်ငံ) မှ ကျောင်းသားတဦးအတွက် တနှစ်စာ ဒေါ်လာ ၂၀၀။
၁၄။ ကိုပီတာ မမျိုးမျိုး (မဘရဏီ) ချင်းမိုင်မြို့ မှ ကျောင်သားတွေအတွက် ဧပြီလအတွက်အလှူငွေ ထိုင်းဘတ်ငွေ (၂၀၀၀) နှင့် လစဉ်အကူညီပေးသွားပါမယ် ။
၁၅။ Mr Fred and Solamita ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ လစဉ် ပုံမှန် ဘတ် ၄၅၀၀ အကူညီပေးပါမယ်။
၁၆။ ကိုဇော်ဇော်လှိုင်(အမေရိကန်နိုင်ငံ)မှ ကျောင်းသားတဦးအတွက် တနှစ်စာ အလျုငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀၀။
၁၇။ Mr Fred and Solamita ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ ဧပြီလအတွက် အကူညီငွေ ၄၀၄၀ ဘတ်။
၁၈။ ကိုပီတာ မမျိုးမျိုး (မဘရဏီ) ချင်းမိုင်မြို့မှ ကျောင်သားတွေအတွက် မေလအတွက်အလှူ ငွေထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၀၀၀ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် လှူဒါန်းပါတယ်။
၁၉။ ဒေါက်တာသန်းကျော် ဒေါ်ခင်းအေးမာ မိသားစုမှ ကျောင်းသားတွေအတွက် ဘတ်ငွေ ၂၄၀၀ လှူဒါန်းပါတယ် ။
20. Aino and Stefan Landes have sent 3965 baht and will do so every six month.
21. Tjanstetandlakarna (Union for dentists ) 3865 baht . One time gift .
22. Gunnar Ekelöf has sent 1750 baht and will send same amount every3month.
လေးစားရတဲ့ နိုင်ငံတကာရောက် မိတ်ဆွေများရှင်
ကျမတိုဟာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်ပြီး အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးများအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ Social action For women အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့အဖွဲဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၅ နှစ်တာကာလမှာ အမျိုးသမီးနဲ့ကလေး လူဦးရေ တသောင်းကျော်ကို အကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒီထဲမှာ မိဘမဲ့ကလေးများအပါအ၀င် HIV ဝေဒနာရှင်အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးများ လူကုန်ကူးခံရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးများ အကြောင်းအမျိုးမျိူးကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးများကို ကူညီစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါတယ်
လက်ရှိမှာ ကျမတို့ စောက်ရှောက်ကူညီထားတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ကလေး ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး ကလေး ၂၀၀ ကျော်ကတော့ ထိုင်းအစိုးရဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းစာသင်ကျောင်းတွေမှာ စာသင်ကြားနေပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ နယ်စပ်မှာ အကူညီတွေလျော့ကျလာတဲ့အတွက် စာသင်ကျောင်း အတော်များများ ပိတ်ပစ်ရမဲ့ အခြေအနေရှိသလို ကျောင်းများပိတ်လိုက်ရမှာဖြစ်လို့ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ကလေး ၉ ထောင်ခန့်ဟာလည်း စာသင်ကြားနိုင်ဖို့ အခက်အခဲရှိနေကြပါတယ်။
ဒီထဲမှာ SAW အဖွဲအစည်းက ကလေးများလည်းပါဝင်ပြီး သူတို့ဆက်လက်ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့နဲ့ သူတို့နေထိုင်ရပ်တည်ရေးအတွက်
နိုင်ငံတကာရောက် မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ အကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
မကြာခင် ဂျွန်လမှာစတင်ပြီး ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ စာသင်နှစ် နှစ်ဝက် ၆ လမှာ ကလေးတဦးချင်းအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀ နှုန်းနဲ့ အကူညီပေးနိုင်မယ့် အလှူရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
ကလေးတဦးချင်းဟာ တနှစ်မှာ ကျောင်းတက်တဲ့လ ၁၀လ ရှိပြီး တလကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀ နှုန်းနဲ့ အကူညီပေးစေလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(Education For All Campaign ကာလကို ၂ ကြိမ်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ပထမ စာသင်နှစ်အတွက် ဧပြီ နဲ့ မေ ၂ လတာ လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်သလို ဒုတိယ စာသင်နှစ်အတွက် ဒီဇင်ဘာနဲ့ ဇန်န၀ါရီလတွေမှာ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိလာတဲ့ အကူညီများကို မိမိတို့ရဲ့ ဝက်ဆိုဒ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွေမှာ ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
SAW Bank Account
Account Name: SAW (Social Action for Women)
Swift code: KASI THB
Bank account number: 212-2-620-46-0
Bank Address: 84/9 Prasartvitee road
City, State, Postal Code: Maesod, Tak, 63110
Money Gram နဲ့ ပေးပို့လိုပါက
Receiver Name : TA TA
Phone number. 6686 939 0681/6687-307-0357/6689-3589-3572
Thank you so much for your attention=
Education For All Campaign,
All our friends overseas!!!
SAW isaThai base organization helping more than ten thousands of women and children who have many problems: HIV/AIDS, human trafficking, sexual violence, family violence, abandonment, sexual abuse and many others, for 15 years ever since it was founded in in 2000.
Currently, we have 300 women and children, and more than 200 children are studying in Thai schools and Burmese migrant schools. As the international funding has run out in 2015, most of Burmese migrant schools will be closed by leaving more than 9000 Burmese children without school, and SAW is facing the same problem.
Therefore, SAW would like to request the friends overseas to help for these children. Any friend who can support $100 for every6months will be greatly appreciated. It will only cost $20amonth.
Education For All Campaign will raise fund twiceayear in April-May and December-January of each academic year, and the announcements will be posted on Facebook and SAW website. The contact will be;
City, State, and Postal Code: Maesod, Tak, 63110.
If someone would like to send by Money Gram;
Copyright © 0415 SOCIAL ACTION FOR WOMEN. All rights reserved.